Ọkachamara Semalt kwuru otu esi ewepu data site na weebụsaịtị
Nke a bụ afọ ọmụma, na enwere ọtụtụ ozi na weebụ nke enwere ike iji mee ka ndụ mmadụ dị mma ma nwee ike iji ya mee ihe maka azụmahịa. O di nwute, ichikota data a abughi ihe na agba ume. Ọ chọrọ ọtụtụ ihe iji nakọta data dị ukwuu - buy fake documents.
Ya mere, enwere ihe di oke mkpa maka mmemme puru iche nke puru inye aka ichikota, hazie ma nyochaa data n'ime usoro ozo di mfe. Ndị na-edebe ihe ọmụma weebụ bụ ihe pụrụ iche e mere iji wepụ data site na ebe nrụọrụ weebụ. Ọ bụghị nanị na ha na-ewepụta ma na-echekwa data, ma ha na-eme ya na ọsọ ọsọ.
Iji nọgide na-asọmpi na azụmahịa gị, ọ bụghị naanị nhọrọ maka ị mụta maka scrapers data weebụ , ọ ghọọlarị. Ọ dị mkpa ka ị mụta otu esi eji ya, ọ dịkwa mkpa ka ị mụta otú e si eji data ọ na-achịkọta maka gị. N'eziokwu, ụfọdụ n'ime ndị na-asọmpi na-eji ya iji nweta asọmpi asọmpi maka gị.
Dịka ọmụmaatụ, ịkwesịrị ịma ọkwa nke ndị na-asọmpi gị na-enye oge niile n'ihi na ego ahụ bụ ihe dị mkpa maka ndị ahịa ịhọrọ ebe ha ga-azụ ngwaahịa ha. Ị nwere echiche ọ bụla ahịa na ndị ahịa ị ga-atụfu ma ọ bụrụ na ọ na-ewe gị karịa awa 48 ịchọta na onye isi gị na-asọmpi emeela ka ị bụrụ onye na-azụ ahịa ngwa ngwa site nanị $ 2? Ya mere, ị ga-achọ nyochaa ndị asọmpi mgbe niile. Nke a bụ naanị otu n'ime ọtụtụ ihe mere ị ga - eji nyocha data weebụ..
Mgbe ị tụlere ihe mere onye ọ bụla ji chọọ nchịkọta data, nke a bụ WebSundew. Ọ bụ ngwugwu nke ọtụtụ scrapers web data. E mepụtara ya iji nyere gị aka na ndị ọrụ ndị ọzọ iji mee ka ọ dị mfe, ịkwado ma rụọ ọrụ usoro nchịkọta weebụ .
Nchịkọta weebụ bụ nanị usoro nke ikpokọta ụdị data na ihe oyiyi sitere na weebụsaịtị dịgasị iche maka ihe kpatara ya. Site na ngwa a, ị nwere ike weputa ozi dị mkpa, gbanwee ya na usoro achọrọ ma chekwaa ya n'ọnọdụ kachasị mma.
WebSundew bụ n'ezie ngwaahịa ngwugwu anọ gụnyere WebSundew Enterprise, ọkachamara WebSundew, WebSundew Standard, na WebSundew Lite. Niile nsụgharị ahụ nwere ike wepụ data na ihe oyiyi si na netwọk dị iche iche ma e wezụga WebSundew Lite nke na-enweghị ike ijide ihe oyiyi.
Ịnwere ike ịchọrọ ịtọpụ data gị, chọpụta ebe a na-echekwa data amịpụtara, ma kọwaa ihe oyiyi site na ederede. Ọ dị nnọọ mfe. Naanị ị ga-eji mbipụta nke WebSundew data scraper kwesịrị ekwesị.
Ikwesighi ịghọ onye na-arụ ọrụ ma ọ bụ onye mmemme iji jiri ọ bụla n'ime ndị nyocha data a. O nweghị ihe ọ ga-eme. N'ezie, ọ na-enye interface dị mfe na-pịa mfe-na-eji interface tinyere ụfọdụ inbuilt wizards. A na-ekpebi mbipụta WebSundew ka ọ bụrụ otu n'ime ndị nchịkọta weebụ kachasị mma.
Akụkụ kasị pụta ìhè nke ngwaọrụ ndị ahụ bụ na ha na-ekwe ka ndị ọrụ jide data na-enweghị ngwụcha site na ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị nsọtụ n'ime obere oge. Ngwaọrụ bụ ụzọ kachasị mma ị ga-esi wepụ na ịchekwa data weebụ.